प्रकासित मिति : २०७६ असार २, सोमबार १६:५७ प्रकासित समय : १६:५७
डोल्पा,नेपालको सबैभन्दा गहिरो तालको रुपमा रहेको फोकसुण्डो ताल डोल्पा जिल्लामा पर्छ । उत्तर–दक्षिण फैलिएको फोक्सुन्डो ताल वरिपरि धेरै भाग चट्टानले घेरेको छ । दक्षिणतिर जंगल छ । तालको आकारप्रकार हेर्न एकै छेउबाट सकिँदैन । एक छेउबाट अर्को छेउ देखिँदैन ।
शे गुम्बा जाने बाटो माथि डाँडामा गएर हेर्दा पनि तालको पूरै भाग देख्न सम्भव छैन । ताललाई स्थानीयहरू फुक्सुम्धो भन्छन् । डोल्पो भाषामा फुक्सुम्धोको अर्थ नेपालीमा त्रिवेणी हुन्छ । यो भनाइअनुसार ताल झन्डै तीनकुने आकारको छ ।
दक्षिणतिरको भाग भने लामो र तल्लो टुप्पो केही फैलिएको छ । पर्यटकहरू त्यही तल्लो कुनामा पुगेर तालको पूरै आकारको अवलोकन नगरी फर्कने गर्छन् ।
समुद्री सतहदेखि ३ हजार ६ सय ५० मिटर उचाइमा रहेको फोक्सुन्डो ताल नेपालकै गहिरो मानिन्छ । यसको गहिराइ ६ सय ५० मिटर छ । केहि महिनाअघि भ्रमणका क्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले ताललाई स्वर्गको टुक्रा भनेका थिए । ताल अवलोकन गर्नेलाई स्वर्गको टुक्रा अनुभूत हुन्छ ।
सदरमुकाम दुनैदेखि ३६ किमि उत्तरमा पर्ने ताल जान दुनैबाट २ दिन पैदल हिँड्नुपर्छ । यसरी कठिन बाटो काटेर फोक्सुन्डो पुग्दा त्यहाँको सुन्दर दृश्यले बाटाका सबै दुख भुलिने पर्यटकहरूको अनुभव छ ।
उत्तरतिरबाट छाल्फु र ढेवुथान २ ठूला खोलाबाट तालमा पानी प्रवेश गर्छ । दक्षिणतिर रिग्मो गाउँ नजिकको खोला बनेको खोल्साबाट तालको सफा पानी बाहिरिन्छ ।
यसरी तालबाट बाहिरिएको पानी करिब ५ सय मिटर तल पुगेर १ सय ६७ मिटरको फोक्सुन्डो सुलिगाड झरना बनेर झर्छ । यो झरनाले फोक्सुन्डो परिसरलाई रमणीय बनाएको छ ।
तस्विरः देबिकृष्ण राेकाया कर्णाली पर्यटन अभियान्ता ।
परिवारबाटै हिंसाको शिकार भयौं : यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय
काठमाडौं ,यौनिक तथा अल्पसंख्यकयौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो
के तपाईलाई राति अबेरसम्म निन्द्रा लाग्दैन ? अपनाउनुहोस् यी १० उपाए
काठमाडौं, आजकल धेरै मानिस अबेर रातिसम्म निन्द्रा नलागेर समस्यामा परेका छन् । यसरी निन्द्रा
२०७६ कार्तिक २८, बिहीबार २१:३०
२०७६ कार्तिक २८, बिहीबार २१:०४
कसरी राख्ने वाइफाईको पासवर्ड सुरक्षित ?
२०७६ कार्तिक २८, बिहीबार २०:५१
यस कारण कुवेतका प्रधानमन्त्रीले दिए राजिनामा
२०७६ कार्तिक २८, बिहीबार २०:३६
२०७६ कार्तिक २८, बिहीबार २०:३१